Lakhuphuka - edlulayo futhi Orienteering
Abantu owakhulela phezu imidlalo ngasekupheleni 90 sika 2000 nangemva nje kwalokho, qiniseka nezwa imidlalo ochungechungeni ngaphansi igama "Gothic", ngakho uvalwe ezingxenyeni izinhliziyo abadlala eziningi kuze kube yilolu suku. Yebo, esanda kukhululwa ingxenye yesine, kodwa sibe qotho kithi ngokwethu - kukude ephelele kanye esidala "Gothic" umoya omuhle. injabulo enkulu kuzo zonke abalandeli kwaba ukukhululwa kwe iphrojekthi entsha, ikhodi-okuthiwa "lakhuphuka", ukudlula lapho thina kokubukeza namhlanje.
izwe Tropical ne ukuhamba ngenkululeko
Ngakho yini esinayo lapha? Esokuqala ongaphandle emhlabeni olubanzi interactive, ivezwa ngendlela eyodwa yalesi siqhingi, ihlukaniswe phakathi kwamaqembu eziningana: ekamu lomphangi, Izanusi oda nokulandelela edolobheni, ezazigxishwe Zamacala Ezihlubuki zangeNkathi Ephakathi. Futhi iyini ezithakazelisayo kakhulu - ungakwazi ngesandla ukhethe ukuthi yiliphi clan ukuze ujoyine. Ngokuvamile, ukudlula umdlalo lakhuphuka kusho ukuthi umdlali kuyaye kamuva kungachazwa sikhethe, ngoba play kuthanda kuphela fun! Vula wonke ukuba uhlole ezifana imidlalo zakudala njalo uba nomsebenzi ezilingayo. Phela, ungathola yizinqwaba umcebo, futhi kungenzeka ukusebenzisa ku iphakethe izibankwa zasendle - awazi lapho uku lucky. Kuyaphawuleka ukuthi kule umqondo lakhuphuka, ukudlula lapho incike nokuzimisela khulula isikhathi yomsebenzisi, ecebile ingcebo ahlukahlukene ecashile ulwazi ngabanye nasezintweni ezazisetshenziswa kudala, x-NPC.
Isenzo iqala neqiniso ukuthi isilo sasolwandle omkhulu okuthiwa Kraken uphahlaze ukuba smithereens emkhunjini, okuyinto ngomkhumbi protagonist. Ngokuyisimangaliso lokusinda ekuphahlazekeni komkhumbi, surf yayo ugeza osebeni, lapho isenzo oqondile iqala. Ragged, abampofu, uhlamvu elambile efuna indlela ukukhuphuka futhi ngandlela-thile ukuzondla. A izikhathi ezimbalwa kamuva, wahlangana abakhileyo esiqhingini, ukuhlinzeka ulwazi olujwayelekile indawo futhi isimo sezombangazwe samanje. Lapha umdlali ekuphambukeni okuyinto ukuya endaweni okokuqala. Ngaleyo ndlela futhi umdlalo enhle lakhuphuka, ukudlula onikeza umsebenzisi ithuba lokuzenzela izinqumo.
Amaqembu kanye nokusetshenziswa yabo
Njengoba kushiwo ngenhla, esiqhingini ngokugcwele 3 namaqembu amakhulu: izigebengu, iNkantolo Yamacala Ezihlubuki nezinkantolo Order of izanusi we umlilo ongcwele. Eyokuqala itholakala engxenyeni esentshonalanga ye ibalazwe emaxhaphozini, kanti isixuku esikhulu edolobheni elilodwa port, kahle, kanti abanye Sekuyisikhathi eside abahlala Isigodlo, etholakala ezintabeni. Iqembu ngalinye has siqu sengqondo zayo ngazinye, ngomhla isimo samanje kulesi siqhingi izizathu ukubukeka endaweni zasendle ezifana - emhlabeni lakhuphuka. Ukudlula umdlalo obhapathiza umdlali ekujuleni izenzakalo: izingobe phakathi kwamaqembu, ukuphishekela ingcebo uzame ukuba ngisindise izwe. Ukungena generality ezifanayo zinikeza ngamabomu kunezinzuzo ezithile protagonist uzwakalise, isibonelo, ufisa lokudayisa, khona izinto eliyingqayizivele (izikhali zempi), izaphulelo amasevisi athile nokunye. Ngaphezu kwalokho, umdlali kuyoba imisebenzi ekhona ezengeziwe amaqembu lapho unquma ukuthi ujoyine. Ukukhethwa elinye iqembu ukuba zimbi kakhulu ngamabomu ubuhlobo bethu nabanye, kuba njalo kukhunjulwe kuwufanele.
Kuzoqhutshwa, noma kunalokho, sewafika
You azi ukuthi ngonyaka odlule kwafika phambili umdlalo, enesihloko lakhuphuka 2 Dark, ukudlula okuyinto uhlobo Isiphetho esinengqondo of siphetfo ingxenye yokuqala.
Kanjani ukwakha idolobha elisezweni lase-"Maynkraft"?
Kanjani ukuze uthole Northrend kusukela Orgrimmar. Zonke izindlela ikhambo
Sergei Shnurova imidwebo yobuciko yesimanje
UJohn McEnroe: umsebenzi we-biography kanye ne-tennis
Radical - kukubi noma okuhle?